Ninka ugu orodka dheereeya adduunka Usain Bolt oo ku fikiraya inuu isku badelo ciyaaryahan kubbada cagta ah…(Wuxuu tababar la qaadan doonaa kooxda…) – Gool FM
Ninka ugu orodka dheereeya adduunka Usain Bolt oo ku fikiraya inuu isku badelo ciyaaryahan kubbada cagta ah…(Wuxuu tababar la qaadan doonaa kooxda…)
Byare November 13, 2016
(Europe) 13 Nof 2016. Ninka ugu dheereeya adduunka ee Usain Bolt ayaa ka fikiraya inuu dabo eryado shaqada kubbada cagta marka uu ka fariisto orodka wuxuuna qorsheynayaa inuu tababar la sameeyo kooxda Borussia Dortmund ee ka dhisan Bundesliga dalka Jarmalka.
Blot ee heysta rikoodhka adduunka ee orodka 100-ka mitir iyo midka 200 ayaa markiisii ugu dambeeysay xagaaga soo socda ku tartami doona World Championships ee ka dhacaya London.
Xiddiga reer Jamaica ayaa xiriir la sameynayay macallina Dortmund Thomas Tuchel sida ay warineyso The Guardian, wuuna arki doonaa waxa dhaca kaddib marka uu waqti tababar ah la qaato kooxda reer Germany.
“Waxaan si dhib ah ula hadleynay dadka,” Bolt ayaa sidaa yiri kaa oo 31-jirsan doona bisha August ee sanadka soo socda.
Usain Bolt ayaa la ogsoon yahay inuu taageere wayn u yahay Man United wuxuuna qirtay inuu weli ku riyoonayo inuu u ciyaaro kooxda lagu naaneyso Red Devils.
“Aniga ahaan haddii aan heli karo inaan u ciyaaro Manchester United, taa waxay noqon doontaa sida riyo rumowday.”.
Tababbaraha Manchester United Jose Mourinho oo raba wali in uu iibiyo Weyne Rooney
'Ronaldo ilaa iyo da'diisa 41-aad wuu ciyaari karaa'.